Vista's Colorful Planet: November 2009
Labels: animals7comments | Links to this post
Oh Lotus flower with beauty kissed by dew,
Waits upon the water for its Spring debut.
No other flower anywhere,
Has such beauty to compare.
Lotus flower, I love you.
This love song is just for you.
Labels: Flowers 8 comments | Links to this post
အရမ်းကိုလိုချင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်မနေ့ ကရောက်လို့ လာပါပြီ။
Shopaholic များဟာကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းအမျိူးမျိူးဝယ်ပြီးရင်ပျော်သလိုပဲ Bookaholic များဟာလည်းကိုယ်နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်ရလာရင် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်၊
ဒီမှာဝယ်လို့ မရလို့ Amazon ကမှာရတာပါ၊
စာအုပ်နာမည် The Sun Also Rises ပါ ၊ နောက်နာမည်တမျိူးက Fiesta ပါ ။
နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီး Ernest Hemingway ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာ
၁၅ နှစ်လောက်က ဖေဖေ့စာအုပ်စင်ကနေ မြန်မာဘာသာပြန်ကိုစဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ပါ ၊
ဘာသာပြန်သူက ဆရာနတ်နွယ် ပါ စာအုပ်နာမည်က ဆန္ဒကျွန်မ တဲ့။
ဒါပေမယ့် ဇတ်လမ်းကသူ့ အကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူး ပြင်သစ်၊ စပိန် တို့ ကိုအခြေခံပြီးတော့ လူတွေရဲ့စရိုက်အမျိုးမျိုး စိတ်ဆန္ဒအမျိူးမျိူး ၊( မရတာကိုမှလိုခြင်တဲ့ဇတ်ဆောင်မင်းသမီး လေဒီအက်ရှလီ ဘရက်ဒ် )၊
( ကျန်တာတွေပေးနိုင်တယ်သူလိုတာပဲမဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ ဇတ်ဆောင်မင်းသား ဂျိတ် )၊
( သူ့ သူငယ်ချင်းပျော်ပျော်နေတတ်သူ ဘင် ) စတာတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ဝတ္ထုပါ။
ကိုယ်ကဘာသာပြန်ကို အလွတ်နီးပါးရနေတာမို့ ဆရာနတ်နွယ်ဟာဒီစာအုပ်ကို အသေးစိတ်ဘာသာပြန်ခဲ့တာပဲဆိုတာ မူရင်းကို ဖတ်ရင်းနဲ့ သိလာရပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်က ကိုကိုက Amazon ကနေ ကင်မရာမှန်ဘီလူးမှာရင်းနဲ့ 
Sir Arthur Conan Doyle ရဲ့ Sherlock Holmes စာအုပ်တွဲ တွေ
မှာမလို့ နင်လိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေပြောလေဆိုလို့ ချက်ချင်းသွားသတိရလိုက်တာ
အရင်ကစာအုပ်မမှာဖူးပါဘူး တခြားဟာတွေပဲမှာဖူးတာ ၊
အဲစာအုပ်ကလည်း အရမ်းဟောင်းနေတော့ ဒီမှာဝယ်မရပါဘူး ၊
ကိုကို့ ရဲ့ Sherlock Holmes တွေလည်းတူတူပဲ အခုတော့အားလုံးနဲ့ အတူရောက်လို့ လာပါပီ ။
အဆစ်ကလေးအဖြစ် Charles Dickens ရဲ့Great Expectations ဘာသာပြန်အမည် မျှော်တလင့်လင့် တောင်ပါပါသေးတယ် ။
Labels: Books 14 comments | Links to this post
Labels: About me 11 comments | Links to this post
Labels: Flowers5comments | Links to this post
Labels: Flowers 13 comments | Links to this post
1st November Sunday: Breakfast @ CCK MOS Burger Outlet ..
Chilli and Plain Hot Dogs meal set.. Yummy !!
Labels: About me3comments | Links to this post